Mahatsiaro tena meloka ve ianao? , Fiangonan'Andriamanitra an'Andriamanitra Suisse (WKG)
Misy mpitarika kristiana izay manandrana tsy tapaka ny olona hahatsiaro tena ho meloka, hany ka afaka manao bebe kokoa mba hampiova finoana ny hafa. Ny mpitandrina dia sahirana miezaka ny hitondra ny fiangonany hanao asa tsara. Asa mafy izany ary tsy azonao atao ny manome tsiny ny mpitandrina rehefa alaim-panahy hampiasa hevitra izy ireo ka mahatonga ny olona ho meloka amin'ny fanaovana azy hanao zavatra. Nefa misy fomba izay ratsy kokoa noho ny hafa, ary ny iray amin'ireo ratsy indrindra dia ny tsy fahitana ara-Baiboly fa any amin'ny afobe ny olona satria tsy nitory ny filazantsara tamin'izy ireo izy ireo talohan'ny nahafatesany. Mety hahafantatra olona mahatsapa ratsy sy meloka noho ny tsy fizarana ny filazantsara tamin'ny olona iray izay efa nodimandry ianao. Izay angamba no fahatsapanao azy.
Anjaran'Andriamanitra mamonjy, ary tena manao tsara ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Tso-drano ny fahitana azy amin'ny ampahany amin'ny asa tsara. Na izany aza, tokony ho fantatsika koa fa miasa matetika Andriamanitra na dia eo aza ny tsy fahaizantsika. Raha mahatsapa ho mavesatra amin'ny feon'ny fieritreretana meloka ianao noho ny tsy nitory ny filazantsara tamin'ny olona iray talohan'ny hahafatesany, maninona ianao no tsy mizara ilay enta-mavesatra amin'i Jesosy? Andriamanitra tsy sarotsarety loatra. Tsy misy olona mikororoka amin'ny rantsan-tanany ary tsy misy olona mankany amin'ny helo noho ianao. Tsara ilay Andriamanitsika ary mamindra fo ary mahery. Afaka atokisanao azy ho eo izy fa ho an'ny olon-drehetra fa tsy ianao ihany.